Iavoloha : Teraka ny governemantan’ny fisokafana -
AccueilRaharaham-pirenenaIavoloha : Teraka ny governemantan’ny fisokafana
12/06/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Tafatsangana omaly ny governemantan’ny marimaritra iraisana tarihin’ny praiminisitra Ntsay Christian, araka ny didim-panjakana lah.2018-540 manendry ireo mpikambana. Araka izany, nampahafantarina omaly ihany ireo mpikambana eo anivon’ity governemantan’ny marimaritra iraisana ity, izay miisa 30.
Amin’ny maha marimaritra iraisana azy, saika voasolo tena ao anatin’izany avokoa ireo ankolafin-kery politika samihafa taorian’ny fifampidinihina sy fifandresen-dahatra. Ho an’ireo depiote 73 na depiote ho an’ny fanovana, dia manana toerana fito ny avy amin’ny Mapar raha efatra kosa ny an’ny Tim. Manana toerana amin’ity governemanta vaovao ity ihany koa ny avy amin’ny HVM. Miisa fito indray kosa ireo minisitra tamin’ny governemanta teo aloha no voatana.
Nambaran’ny Filohan’ny Repoblika, Hery Rajaonarimampianina, araka izany, fa governemanta mampiseho taratra ny fisokafana sy ny fikatsahana hatrany ny tombontsoa ambonin’ny firenena, ka handraisan’ny rehetra andraikitra mba hirosoana mankany amin’ny fifidianana Filoham-pirenena.
Narafitra ary mifanaraka amin’ny didy navoakan’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàm-panorenena (HCC), ny 25 mey 2018, ity governemanta ity. Nahafahana ihany koa niroso tamin’ny fifanarahana politika eo amin’ny fananganana izany.
Ny andrandrain’ny rehetra, hoy ny Filoha Hery Rajaonarimampianina, ny hahatanteraka ny fifidianana amin’ny fomba mangarahara, ahafahan’ny rehetra mandray anjara ary ho fanamafisana ny demokrasia sy ny filaminana, ka ho eken’ny rehetra ny vokany fa tsy sanatria ho fototra korontana ho an’ny firenena indray.
Voalaza ihany koa fa fandresena lehibe ho an’ny firenena sy ny demokrasia, izay tiana hamafisina, ny fananganana ny governemantan’ny marimaritra iraisana satria fanaporofoana fa ny tombontsoa ambonin’ny firenena sy ny vahoaka no katsahina mandrakariva.
Manan-tantara teo amin’ny fifandraisana iraisam-pirenena Antsiranana tamin’ny ady lehibe faharoa. Toerana izay nitrangan’ny fifandonana nantsoina hoe « Bataille de Madagascar », ka nidiran’ny anglisy tao raha mbola nanjaka tany ny governemanta Vichy. Ny tantara tsy fanadino. Nandritra ...Tohiny